Xukuumadda Somaliland Oo Ka Jawaabtay Eedo Siyaasiyiin Mucaarid ahi u Soo Jeediyeen | Salaan Media
Xukuumadda Somaliland Oo Ka Jawaabtay Eedo Siyaasiyiin Mucaarid ahi u Soo Jeediyeen
“Waxaan u soo jeedin lahaa inay iska daayaan intay soo fadhiistaan ay Madaxweyne Siilaanyo Ammaan tin iyo cidhib u Buuxiyaan, hadana ay habaar ku xigsiiyaan”
“Waad tilmaanteen shakhsiyadda dhabta ah ee Madaxweyne Siilaanyo inuu yahay shakhsiyad aan qabiili ahayn, musuqmaasuq lahayn….”
“Arrinta HUBAAL Kama Hadlayo Oo Maxkamad ayaa Gacanta ku haysa…”
HARGEYSA (SM)- Wasiir Ku xigeenka Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse), ayaa jawaab ka bixiyay eedo ka soo yeedhay siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha UCID, Boobe Yuusuf Ducaale, Eng. Maxamed Xaashi Cilmi iyo Cali Guray oo dawladda ku eedeeyay talaabadii maxkamaddu ku xayirtay Wargeyska HUBAAL.
Wasiir Ku xigeenka Warfaafinta oo u waramayay TV-ga Qaranka waxa la weydiiyay sida uu u arko eedo ay siyaasiyiintaasi u soo jeediyeen xukuumadda uu ka tirsan yahay, waxaanu ku jawaabay “Waa laba Arrin oo isa saaran su’aasha aad I weydiinaysaa, midi waa Arrinta Wargeyska Hubaal, midina waa ragaas waaweyn ee TV-yadda soo fadhiistay ee magacyadooda aad loo garanayo ee inta ay Xaraf soo fadhiisteen maalinta dhan hadlayay. HUBAAL arrinteeda kama hadlayo waayo waa arrin ay maxkamadi gacanta ku hayso, mar haddii ay maxkamad taalana cidina xaq uma leh inay ka hadasho illaa maxkamaddu ay dhan u rido.
Markaa Nimankaas waaweyn ee odayaasha ah waxaan u soo jeedin lahaa markay doonayaan inay wax dhaliilaan waa in iyagu marka hore nadiif ka noqdaan dhaliisha, waaba aasaasi oo waxay ku soo gabadeen arrin maxkamad taalla, iyagoo garanaaya shuruucda iyo qawaaniinta waxa ay xaq u leeyihiin inay ka hadlaan iyo waxa aanay xaqa u lahayn inay ka hadlaan oo ah sida arrintan maxkamadda taalla Haddii aanay markhaati ka ahayn oo aanay dhinac ahayn, waxa ka hadli kara oo kaliya garsooreyaasha, xeer ilaaliyeyaasha iyo dhinacyada.”
Md. Cabdilaahi Cukuse oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Ta kale markaan arkay nimankaas odayaasha ah ee TV-ga soo fadhiistay ee ay ka mid yihiin Faysal Cali Waraabe, Maxamed Xaashi, Boobe iyo Cali Guray. waxaan is idhi idhi malaa waxay ka hadlayaan arrin dawlada Hoose ee Hargeysa ku saabsan oo dhamaan nimankan odayaasha ahi waa reer Hargeysa oo waxay ka hadlayaan arrin ay ku saxayaan Golaha deegaanka caasimadda ama waxa kaliya ee isku keeni karaa uun intoodaas oo dhami waa arrin ku saabsan inay magaaladooda dhisayaan ama arrin aqoonsiga ku saabsan uun bay ka hadlayaan.”
Wasiir Ku xigeenka Warfaafintu waxa uu u soo jeediyay siyaasiyiintaasi inay u soo noqdaan xaqaa’iqa iyo runta, waxaanu yidhi “Waan yaabay siday u hadleen inkasta oo raggu siday u kala culus yihiin u kala hadal weynaayeen, una kala fiicnaayeen. Ragaasi ha ku jiraan rag aan dar-daaran ku qabno inay fasax u yihiin waligoodba waxay doonaan inay yidhaahdaan oo aan looba jawaabin-ba. Haddana inkastoo odayaashaas waaweyn ee muxtarimka ah waxaan u soo jeedin lahaa oo aan odhan lahaa inay u soo noqdaan xaqaa’iqa iyo runta oo ay iska daayaan intay soo fadhiistaan ay madaxweyne Siilaanyo ammaan tin iyo cidhib u buuxiyaan, hadana ay habaar ku xigsiiyaan.”
“Habaarka iyo ammaantu isma qabtaan waxaan leeyahay waad tilmaanteen shakhsiyadda dhabta ah ee Madaxweyne Siilaanyo inuu yahay shakhsiyad aan qabiili ahayn, musuqmaasuq lahayn oo uu yahay shakhsiyad dadka aan calool xumo u hayn, wadankana daacad u ah, intaaba idinkaa afkiina ka sheegay oo ka markhaati furay laakiin habaarka dambe ee aad ka daba keenaysaan iska daaya,”ayuu yidhi Wasiir Ku xigeenka Warfaafintu.